🥇 ▷ 30 talooyin iyo tabaha si aad uga faa iideysato P30 Pro iyo P30 Lite ✅
30 talooyin iyo tabaha si aad uga faa iideysato P30 Pro iyo P30 Lite
Huawei P30 Pro iyo P30 Lite ee cusub ayaa lagu iibinayaa gudaha Brazil iyagoo keenaya waxqabadka tusaalooyinka ah iyo kaamerooyin awood badan; ogow kheyraadkaaga
THE Huawei khadka ayaa ku dhawaaqay P30 suuqa Brazil oo leh laba taleefanno gacmeed: P30 Pro, oo lagu sharraxay sida “Kaamirada taleefanka ugu fiican adduunka”, iyo tan ugu macquulsan P30 Lite. Labada gacmoodba waa kuwo dhameystiran oo mid walbana uu qaato khibradda P30 siinayaa Huawei dhageystayaashaada bartilmaameedka ah.
Laakiin dabcan, waxaa jira astaamo badan oo qabow oo lagu qariyey gacmo-gacmeedyada oo siinaya qofka isticmaala khibrad muuqaal leh, sida Sirdoonka Artificial, screen smart iyo camera. Kuwa doonaya inay iibsadaan khadka P30, ama horeyba u leedahay taleefanka casriga ah ee khadka, waxaan kuu diyaarinnay 30kan talooyin iyo tabaha si aad uga faa iideysato qalabka oo aad u isticmaasho awooda buuxda ee aaladda.
Digniin ka hor intaanan bilaabin tirinta: talooyinka iyo tabaha hoos ku taxan ayaa labadaba u shaqeeya P30 Pro ku saabsan P30 Lite. Si kastaba ha noqotee, astaamaha qaarkood ee lagu sharaxay ayaan wali ku jirin moodhalka yar. Ha walwelin, waan kuu sheegi doonnaa nooca aan ka hadlayno.
Khamaarka ugu weyn ee suuqa casriga casriga ah ee 2019, the P30 Pro wuxuu keenayaa shaashad ixtiraam. Waa 6.47 ” aan dhammaad lahayn oo leh HD HD oo dhammaystiran, tikniyoolajiyadda OLED iyo taageero heerka caadiga ah ee HDR10. Xalka noocan oo kale ah ayaa loo beddeli karaa HD + haddii aad doorbideyso, sabab la xiriirta culeys la’aan ama doorbidis, waana wax aad u fudud.
Horaa loo galay P30 LiteWaxa kale oo jira shaashad Full HD + ah, laakiin cabirkiisu waa 6.15 inji iyo tikniyoolajiyaddu waa LED. Labada shaashad waa mid aad u qurux badan, in kasta oo P30 Pro Waxay leedahay midab qoto dheer oo madow iyo muuqan badan.
Si aad u beddelato, u aad Dejinta / Muujinta Muujinta / Go’aanka Shaashadda. Waxaad kaga tagi kartaa xulashada qaraarkan taleefankaaga casriga ah markay ogaato inuu batterigu hooseeyo. Si tan loo sameeyo, si fudud u awood Xalka ‘Smart Resolution’.
O Hab madow waa howl ay dhamaan taleefannada casriga ah kuwa badankood ku guuleystaan. Hawsha, marka lagu daro ka tagista taleefanka casriga ah oo leh dhawaaqyo mugdi ah – gaar ahaan, qurux badan – waxay ka caawineysaa badbaadinta baytariga iyo nasashada aragtida iftiinka buluuga ah ee waxyeelada leh.
Nasiib darrose, Hab madow kaliya ayaa laga helayaa EMUI 9.0 laga bilaabo P30 Pro. Waxaa laga yaabaa in casriyeyn mustaqbalka ah laga yaabo in aan ku aragno shaqada qaabka ugu aasaasiga ah.
Si aad awood ugu siiso Hab madow ee P30 Pro, gal Dejinta / Beytariga / Qulqulka mugdiga ah.
Habee shaashadda guriga
Sida taleefan kasta oo leh noocyo kala duduwan oo ikhtiyaar u ah shakhsi ahaantaada, waad ku habbeyn kartaa waraaqda derbiga ah, astaamaha, wareejinta, iyo qaabeynta shaashadda guriga ee taleefankaaga. P30 Pro intee ku jirta P30 Lite leh tilmaam yar oo qanjaruufo shaashadda guriga ah.
Warka ugu weyn halkan waa EMUI, istcimaalka caadiga ah ee ku saleysan Android 9, kaas oo kuu oggolaanaya inaad u beddelato wareejinta shaashadda illaa doorbidistaada. Waxaad sidoo kale burburin kartaa astaamaha dalabka si ay ugu habboonadaan wax badan hal shaashadda haddii aad doorbideyso.
Waxaa jira 3 qaab oo lagu daabaco shaashadda:
Tan koowaad waa adigoo riixaya badhamada + badhanka mugga isla waqti isku mid ah;
Screenshot, gudiga ogeysiinta, sidoo kale waad ku daabacan kartaa;
Hoos u riix saddex farood si aad uhesho (xaadirka ah) P30 Lite);
Iyo kii ugu dambeeyay uguna xiisaha badnaa, laba-laab fartaada farta shaashadda si ‘loo daabaco’ si loo qabto shaashadda. Intaa ka dib, kaliya kor u jiid sawirka oo dooro habka wadaaga (ku jir gudaha P30 Pro).
Muuqaal raaxo leh
Raaxo Indhaha ayaa noqotay astaamaha lagama maarmaanka u ah casriga kasta, iyadoo la siinayo waqtiga uu adeegsaduhu ku baxayo maalin walba. Muuqaalka ayaa asal ahaan hoos u dhigaya nambarka iftiinka buluuga ah ee uu soo daayay taleefanka casriga wuxuuna indhaha ka dhigaa inuusan xanaaqin.
Telefonka casriga ahi wuxuu ku siinayaa dhowr ikhtiyaar oo barnaamijyada loogu talagalay muujinta in la damiyo ama la demiyo, ama looga tago weligiis. Waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto fiidka hore ilaa subaxda xigta. Markaa lumin mayso hurdadaas aad dooneysay.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Muujinta Muujinta / Raaxada Indhaha.
Maalmahan casriga casriga ah Waxay sii kordhayaan qaadashada falsafada “ka sii yar”. Tartiib tartiib, qaanada barnaamijyada ayaa soo baxayay ilaa maantadan ay shaashadda guriga lafteeda ku jirto. Haddii aan loo isticmaalin oo aad door biddo in codsiyada oo dhan lagu abaabulo qaanad-qolka meesha aad joogi lahayd, la soco inaad ku dhaqaajin karto qaabkii hore labadaba nooca ugu awoodda badan iyo P30 Lite.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / shaashadda guriga & Warqadda derbiga / qaabka shaashadda guriga / Muuji dhammaan barnaamijyada xaylka.
Ah, farqiga. Shirkado badan oo ay dhaleeceeyeen macaamiisha aad u tiro badan, shirkaduhu waxay la yimaadeen xalal qaarkood si ay u carqaladeeyaan fakarka. Labadeenuba taleefoonnada casriga ah, waxaa jira taxadar aan yarayn, oo aad uga yar sidii markii hore loo isticmaali jiray iPhone-ka, laakiin xitaa sidaas waxaa jira kuwa aan u istaagi kareynin inay shaashadda ka arkaan god. Xalka Huawei Ku dar dhar go ‘dusha sare ee ku dhuumanaya uruuradda.
Si aad u fuliso qalliinka, u aad Dejinta / Muujinta Muujinta / Meelaha Muujinta Badan / Heerka.
Kuwa cusub ee casriga ah ayaa bixiya Huawei waa kuwo aad u firfircoon oo waxay qabtaan howlaha Store Store si aad u wanaagsan. O P30 Pro waxaa la keenay processor-ka Kirin 980, oo ah processor-ka 7nm ee ugu horreeyay adduunka, waana kan ugu weyn ee la tartami kara Snapdragon 855, tusaale ahaan. Mar horeba P30 Lite Waxay la timid Kirin 710, taas oo celcelis ahaan ku jirta Snapdragon 670. In kasta oo ay aad u dhakhso badan tahay, waxaad ka yeeli kartaa iyaga xitaa ka dhakhso badan adoo awood u siinaya fursadaha horumariyaha iyo beddelaada cabirka hal-abuurka. Xusuusnow: Adeegsiga xulashooyinka horumariyaha iyadoon aqoon hore loo helin waxay ku dambayn kartaa cilad darrada aaladda. Raac tilmaamaha hoosta:
Tag Nidaamka / Nidaamka / Taleefoonka oo guji 5-10 jeer ka badan Lambarka Lambarka illaa “Waxaad tahay soo-horumarin” ayaa muuqanaya;
Mar alla markii aad noqoto horumariye, dib ugu noqo Nidaamka / Habka xulashada ee Beddelka oo aad u beddesho Miisaanada Daaqadda Animation, Iskeelka Animation Animation, iyo xulashada Qiyaasta Xilliga qiyaasta illaa qiyaasta 0.5x.
Isbedelka ka dib, waxaad durba dareemi kartaa xoogaa xawaare ah oo nidaamka ah. Haddii aad doorbideyso inaad si tartiib tartiib ah ama qaab caadi ah u sameyso, same isla howsha isla markaana u beddel qiyamka 1.0x.
Sawir deg deg ah
Ma dooneysid inaad hilmaamto rikoorkaas isdaba-joogga ah maxaa yeelay taleefankaaga casriga ahi si dhakhso leh ugama furin kaameeraha P30 waxaad ka qaadan kartaa sawir dhakhso badan oo dhakhso ah adigoo laba-riixaya badhanka mugga mugga.
Iyada oo leh shaashad sidan oo kale ah, ku-shubid badan ayaa seegi kari waayey. Muuqaalka ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho laba dalab oo isku habboon si markaa waqti u lumin. Si aad u dhaqaaqdo, fur app oo aad u hayso furaha barnaamijyada ugu dambeeyay ilbiriqsiyo yar. Codsiyada waa la kala qaybin doonaa isla mar ahaantaasna waa la marin karaa. Codsiyada waxaa lagu khafiifin karaa doorbidista.
Waxa ugu fiican, waxay la shaqeysaa labadaba taleefanka gacanta.
EMUI-da cusubi waa mid ka mid ah isbadallada ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Android, laakiin qaar ayaan la qabsanin xulashooyinka is-beddelka badan marka hore. Sidaa darteed, the Huawei ku daray Qaab fudud, taas oo EMUI ka dhigaysa mid ka sahlan oo leh codsiyo muhiim ah iyo farta waaweyn.
Si loo fududeeyo Muuqaalka Fudud ee P30 Lite ama P30 Pro, gal Dejinta / Nidaam / Hab fudud.
Habka Hal-Gacmeedka Habka
Iyada oo leh shaashad weyn oo ah 6.47 inch oo ku taal mashiinka P30 Pro iyo 6.15 gudaha P30 Lite, waa wax yar oo ay adag tahay in la isticmaalo aagga gacanta oo dhan hal gacan. Huawei ayaa taas ogaatay oo waxay ku keentay Howlgal hal gacan ah, kaasoo “gaabinaya” shaashadda taleefanka gacanta si aad ugu dhaqaaqdo dhammaan aagga taleefanka gacanta.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Kaaliyaha Smart / Howlgalka Hal-Gacmeed oo karti u yeelo. Si aad u gasho qaabka, ku riix batoonka guriga midigtiisa.
Shaashadda khadka P30 Waa dawaynta isha, waana hubtaa inaad rabto inaad isticmaasho shaashad kasta oo shaashad ah oo aan sida ugu habboon loo isticmaalin. Jiidashada tilmaamtu waa sidaas oo keliya, waxay baabi’ineysaa barta taraafikada, waxayna isticmaashaa tilmaam si ay dib ugu laabato, u hesho barnaamijyadi ugu dambeeyay, uguna laabto shaashadda guriga.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Nidaamka / Nidaamka Nidaamka oo ay karti u siiso wareejinta tilmaanta.
Xariiqda P30 Waxay leedahay qaabab qaabeed dhowr ah si kor loogu qaado waxqabadka casriga. Isaga, habka caadiga ah ayaa wax ka qaban doona dhammaan codsiyada culus iyo cayaaraha horeyba uga mahadcelin jiray Kirin 980 processor ka P30 Pro, ama Kirin 710 ee P30 Lite. Laakiin haddii aad doorbideyso, waad awoodsiin kartaa habka udgoonka si aad kor ugu qaaddo taleefankaaga. Maskaxda ku hay in habkan uu hoos u dhigayo nolosha bateriga, sidaa darteed waxa jira habab Power Saver iyo Ultra Power Saver. Iyaga oo aan uga duwanayn Waxqabadka, labadan waxay yareeyaan howshaada taleefanka gacanta, laakiin taas bedelkeed waxaad awoodi doontaa inaad guriga aado ama aad baadi goob ugu hesho.
Si aad awood ugu yeelatid labada qaab, tag Dejinta / Bateriga.
Labada P30 Lite intee P30 Pro waxaa laga yaabaa in midabada shaashadda wax laga beddelo, haddiiba aad doorbidid midab diiran ama ka sii qabow. Waxaa jira qaabab horay loo sii qorsheeyay, sida Vivid, Hot, Qabow, Jaangooyo ama Caadi, oo lagu daray awooda lagu beddelo gacanta.
Si aad u bedesho goobtaan, tag Muuji Dejinta / Heerkulka iyo Qaabka Midabka iyo heerkulka oo dooro doorbidistaada.
Caawiyaha Google tilmaam
O Kaaliyaha Google hadda uunbaa fududaaday inaad shaqeyso. Ugu P30 Pro, ka dhaqaaq dhinaca hoose ee midig ama bidix bidix oo samee amarka.
Shaashadda OLED ee P30 iyo P30 Pro ku habboon yahay Had iyo jeer Soo Bandhig, sida aad u arki karto qaar ka mid ah macluumaadka daruuriga ah sida nolosha batteriga, ogeysiisyada, iyo taariikhda iyo waqtiga shaashadda la dansan yahay.
Si aad awood ugu siiso Had iyo jeer Soo Bandhig, marin u hel Dejinta / Shaashadda Guriga & Muuqaalka / Had iyo jeer Soo Bandhig.
Sida P30 Pro Waad badbaadin kartaa saaxiibkaa batteriga ku daadiyey adiga oo neefsanaya dheeri ah illaa tallaalka xiga. Kusoocelinta ku dallacsiinta taleefankaaga casriga ah dib ayey u soo celin kartaa qalab kasta oo la jaan qaada, ha ahaato smartwatch, headphones wireless, smart phones ama qalab kasta oo kale.
Wac deg deg ah
Si aad u fuliso amarrada codka, marka hore hubi in Ku-shaqeynta Codka Waxqabadka. Tag Xawaaraha Xawaaraha oo dhaqaajiso.
Xiriirka EMUIMarka lagu daro suurtagalnimada dhaqdhaqaaqyada kala duwan, waxay leedahay amarro cod oo xiiso leh si ay ula falgalaan adiga P30 adigoon taaban shaashadda. Tusaale ahaan, marka aad shaashadda xirtid, riix oo qabo batoonka mugga illaa aad maqashid digniin. Markaa dheh ‘Wac’ qofka magaciisa ‘.
Isku dheelitirka dhijitaalka ah
O Isku dheelitirka dhijitaalka ah waxay kaa caawineysaa inaad la socoto isticmaalka shaashadda. Tan, waxaad ku fahmi kartaa isticmaalkaaga taleefonka casriga ah waxaadna sameyn kartaa xayiraad.
Hada labo ayaa leh Whatsapp ama Facebook oo leh akoonno kaladuwan uma baahna laba taleefanno gacmeed. Xariiqda P30 waxay keenaysaa arjiga mataanaha, kaas oo ka dhigaya nuqul shabakadda bulshada in laga geli karo koonto kale, iyadoo aan loo baahnayn qalab kale. Muuqaalkan nuqulka codsigu wuxuu muhiim u yahay kala saaridda nolosha shaqsiyadeed iyo xirfadeed iyo u habeynta abaabulkooda.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Barnaamijyada / Qalabka Mataanaha.
Marka lagu daro furitaanka shaashadda ama dhabarka (haddii ay dhacdo P30 Lite), khadka P30 wuxuu ku yimaadaa furid aqoonsi wajiga, kaas oo ku xaqiijinaya mulkiilaha wejiga. Qaabka wuxuu adeegsadaa kaameeraha hore si uu u garto oo furitaanku aad u dhakhso badan.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Amniga & Asturnaanta / Aqoonsiga Wajiga.
Ammaan dheeraad ah feylashaada
Hadaad hayso feylal, sawirro, ama fiidiyowyo taleefankaaga oo qofna arki karin laakiin adiga, khadka P30 Ma jiro hab si qarsoodi ah loogu diro feylasha noocaas ah marinka sirta ah oo keliya. Karti vault oo ku tuur dhammaan faylashaada gudaha.
Si aad awood ugu yeelatid, tag Dejinta / Amniga & Qarsoodiga / Amaanka / Kordhinta.
Telefoonka tooska ah
Hadda xogtaada uga wareeji taleefan duug ah aalad Huawei Way fududaatay. Xogta aad ku dari karto wareejinta waxay noqon kartaa xiriiriyeyaal, Barnaamijyo, Wi-Fi, faylal fara badan, iyo inbadan.
Si aad awood ugu yeelatid, ka raadi goobaha Clone Mobile.
Maxaa dhacaya markaad kor u qaaddo barnaamijkaaga ‘P30 Pro’ ama ‘P30 Lite’?
Waxaan nahay taleefanno casriga ah Waad qeexi kartaa waxa dhici doona markaad kor u qaaddo taleefanka gacanta. Markay bakhtiiso, kor u qaad qalabka si aad u toosiso shaashadda, aad u garaacdo codadka, oo hoos u dhig codka dhawaaqa.
Ka raadi Soo Qaadashada goobaha oo dooro.
Kaamiro wanaagsan waxay ubaahantahay Habeen Habeen wanaagsan si ay u qaadaan sawirro waaween xitaa xaaladaha fudud ee adag. Hawshu waxay ku jirtaa labada gacmood ee khadka tooska ah runtiina way caawinaysaa markii sawirkan mugdiga ah laga qaadanayo.
Ka Hesho Habeen Habeex ah oo loo maro Qalabka Kaameeradda.
Xaqiiqdu waxay tahay: in kasta oo la isku khilaafsan yahay, Mode wuxuu ku jiraa P30 Pro oo sawirradihiina runtii way wanaagsan yihiin. Shaqadu waxay ka faa iideysaneysaa casriga casriga ah ilaa 50x iyo, iyadoo la kaashanayo Sirdoonka Artificial, waxay duubtaa muuqaalo dayax gacmeed. Dhawaan, waxaa soo baxay warar sheegaya in Huawei uu adeegsanayo sawirro diyaarsan oo uu isbarbar dhigayo dhagsiika.
Khayaanada iyo in kale, runtu waxay tahay in wax aan la xaqiijin iyo isticmaale ka faa iidaysan muuqaalkan, isagoo awood u leh inuu qaato sawirka riyada dheer ee dayaxa oo aan u ekaanaynin iftiinka iftiinka.
Shaqadu waxay kujirtaa oo keliya P30 Pro waxaana laga heli karaa barnaamijka Kaamirada.
Ha walwelin, waxaad helaysaa meel ku filan oo gudaha ah oo aad ku kaydiso dhammaan Barnaamijyada, sawirrada, fiidiyaha iyo cayaaraha taleefankaaga casriga ah. O P30 Lite Waxay la timid 128GB oo xusuusta ah iyada oo loo sii ballaadhinayo 1TB in ka badan iyada oo loo sii marayo kaarka xusuusta. Pro waxaa laga heli karaa qeybaha leh illaa 512 GB oo xusuusta ah.
Batterigu kama muuqdo P30 Lite, laakiin maahan qodob taban
Hadaad haysato wax kabadan hal qalab Huawei gurigaaga ilaali Huawei Share Waxay suurta gal noqon doontaa in si dhakhso leh loo wadaago feylasha dhexdooda isla markaana aan la istcimaalo shabakadda moobiilka.
Waxay sidoo kale la wadaagi kartaa kumbuyuutarkaaga iyadoo si fudud laguugu xiray oo lagu xiray isla shabakadda Wi-Fi. Daabac faylasha ka Huawei Share Waa suurtagal, taas oo durba soo marta dhammaan wixii la wadaagi lahaa meioca.
Kordhinta astaamaha lagama maarmaanka ah, duubista shaashadda ayaa karti u ah dhalashada EMUI 9.0. Shaqada ayaa kuu oggolaaneysa inaad duubto wax walba oo ka socda shaashadda taleefanka gacanta oo weli waad dhaqaajin kartaa makarafoonka.
Duubista shaashadda ayaa diyaar u ah helitaanka dhaqsi ee Xarunta Ogeysiinta.
Fursadaha aan dhamaadka lahayn ee khadka P30
Marka lagu daro 30kan talooyin iyo tabaha, labadaba P30 Pro intee P30 Lite Waxay leeyihiin howlo fara badan oo macaamiisha ka dhigaya khibrad sahlan oo ka sii fiican. Baadh, ha ka baqin raadinta iyo raadinta astaamaha wanaajinaya hawlgalkaaga taleefannada casriga ah iyo waxa hareerahaaga ka dhacaya. Ma jiraan wax shaqeynaya khadka P30 ma jeceshahay inaad akhristayaasha la wadaagto? Ku dhaaf faallooyinka hoose.
Dib u eegista Fiidiyaha P30 Lite
Dib u eegista P30 Pro Vidiyoga
Huawei P30 Faahfaahinta Farsamada
Moodel Huawei P30 Pro
Shaashadda 6.47 ” Full HD + OLED
88.61% aagga hore
Shaashadda shaashadda sawirka faraha
Processor HiSilicon Kirin 980 7nm octa-core
8x ilaa 2.6MHz
Mali G-76 MP10 GPU
kaydinta 8 GB + 512 GB (nooca Brazil)
gadaal Ugu weyn: 40 MP ballaaran, f / 1.6 aperture, 27m
autofocus iyo IOS
Secondary: 8 MP telephoto, f / 3.4 aperture,
5x zoom optical, autofocus iyo IOS
Dugsiga sare: 20 MP xagal ballaadhan,
aperture f / 2.2, autofocus
Qotada Dheer ToF
hore 32 MP, f / 2.0 aperture, HDR
Duubista 3840 × 2160 (4K UHD) (30 fps)
Durbaan 4.200mAh 40W Ultra Fast Charging
15W Xaraashka Wireless
2.5W Lacag celinta Kusoo Noqoshada
KELIYA EMIU 9.1 oo ku saleysan Android 9 Pie
Iska caabin Biyaha iyo boodhka (IP68)
Midabada Madow, buluug, casaan iyo caddaan
Qiimo R $ 4,899.00
Huawei P30 Lite Faahfaahin farsamo
Wax soo saar Huawei P30 Lite
Shaashadda 6.15 inji buuxa HD + IPS LCD
84% adeegsiga shaashadda
(4 × 2.2GHz + 4 × 1.7GHz)
kaydinta 4GB RAM
128GB kaydinta gudaha
Ilaa 1TB ballaarinta xusuusta iyada oo loo sii marayo MicroSD
Sawirka gadaal Saddex kamaradood: 24 MP, f / 1.8, (ballaaran), PDAF
8MP, 13mm (guud ahaan)
2 MP, f / 2.4, adkeynta diirada
Kaameerada hore 32 MP, f / 2.0
KELIYA EMUI 9.0 oo ku saleysan Android 9 Pie
Cod Haa, oo leh jaakada makarafoonka
Durbaan 3.340mAh oo si dhakhso leh loo dallaco
Isku xirnaanta Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual band, Wi-Fi Direct, hotspot
GPS, raadiyaha FM (suuq ku tiirsan)
2.0, Nooca C 1.0 iskuxiranka dib loo celin karo
Midabada Madoow iyo cirifka
Qiimo R $ 1,899.00